Aịzaya 63 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe Jehova mere mba dị iche iche maka ihe ha mere (1-6)
Ihe Jehova mere n’oge gara aga iji gosi na ọ naghị akwụsị ịhụ ndị ya n’anya (7-14)
Ekpere ndị chegharịrị echegharị kpere (15-19)
63 Ònye bụ onye a si Ịdọm na-abịa,+Onye si Bọzra+ yiri uwe tụrụ àgwà* nke na-egbuke egbuke na-abịa,Onye yikwa uwe dị ebube,Jiri ike ya dị ukwuu zọrọ ije na-abịa? “Ọ bụ m, bụ́ onye* na-ekwu ihe ziri ezi,Onye nwere ike dị ukwuu ọ ga-eji zọpụta ndị mmadụ.” 2 Gịnị mere ákwà gị ji na-acha uhie uhie?* Gịnịkwa mere uwe gị ji dị ka nke onye na-azọcha mkpụrụ vaịn n’ebe a na-azọchapụta mmanya?+ 3 “Naanị m zọchara mkpụrụ vaịn dị n’ebe a na-azọchapụta mmanya. E nweghị onye ọ bụla so m. Eji m iwe na-azọcha ndị iro m,Ejikwa m ezigbo iwe na-azọpịa ha.+ Ọbara ha nọ na-agbasa m n’uwe,Metọchaakwa uwe m niile. 4 Ụbọchị m ga-abọrọ ndị m ọbọ dị m n’obi,+Afọ m ga-agbapụta ndị m eruokwala. 5 Anọ m na-ele anya, ma e nweghị onye na-enyere m aka. O wutere m na o nweghị onye chọrọ ịkwado m. Ọ bụzi aka m ka m ji zọpụta ha.*+ Ezigbo iwe ji m bụ ihe nyeere m aka. 6 M ji iwe na-azọda mba dị iche iche n’ala. M mere ka ezigbo iwe ji m na-egbu ha ka mmanya,+Meekwa ka ọbara ha na-awụsa n’ala.” 7 M ga-ekwu ihe niile Jehova mere nke na-egosi na ọ hụrụ ndị ya n’anya. M ga-ekwu ihe niile Jehova mere nke e kwesịrị iji na-eto ya. M ga-ekwu ihe niile Jehova meere anyị,+Ya bụ, ọtụtụ ihe ọma o meere ndị Izrel. O mere ihe ndị a maka na ọ na-eme ebere, hụkwa ndị ya n’anya nke ukwuu. 8 O kwuru, sị: “N’eziokwu, ha bụ ndị m na ụmụ na-agaghị enupụrụ m isi.”+ Ọ bụ ya mere o ji bụrụ Onye Nzọpụta ha.+ 9 N’oge niile ha nọ na-ata ahụhụ, ọ nọ na-ewute ya.+ Onye ozi ya* zọpụtara ha.+ Ọ gbapụtara ha maka na ọ hụrụ ha n’anya, na-emetekwara ha ebere.+ N’oge ahụ niile, o buliri ha elu, lekọtakwa ha ụbọchị niile.+ 10 Ma, ha nupụụrụ ya isi,+ meekwa ihe wutere mmụọ nsọ ya.+ Ọ ghọziri onye iro ha,+Lụsokwa ha ọgụ.+ 11 Ha malitere icheta oge gara aga,Oge Mosis ohu ya dị ndụ. Ha sịrị: “Olee ebe Onye ahụ si n’oké osimiri kpọpụta ha+ na ndị na-azụ atụrụ ya nọ?+ Olee ebe Onye ahụ nyere Mosis* mmụọ nsọ ya nọ?+ 12 Ọ bụ Onye ahụ ji ike ya dị ebube* nyere Mosis aka.+ Ọ bụ ya kewara mmiri n’ihu ha+Iji mee ka a na-echeta aha ya ruo mgbe ebighị ebi.+ 13 Ọ bụkwa ya mere ka ha were ụkwụ gafee mmiri na-ekwo ekwo.* Ha gafere n’adaghị ada,Dị ka ịnyịnya nke na-aga n’ọzara.* 14 Mmụọ Jehova mere ka ha zuru ike+Otú anụmanụ si agbada na ndagwurugwu gaa zuru ike.” Otú a ka i si duru ndị gịIji mee ka aha gị na-ede ude.*+ 15 Si n’eluigwe lee anya. Si n’ebe i bi, bụ́ ebe dị nsọ, nke dị ebube,* hụrụ. Olee ihe mere na ị naghịzi atụpụrụ anyị ọnụ, ị naghịkwa enyere anyị aka? Olee ihe mere na ihe gbasara anyị anaghịzi emetụ gị n’obi,+ ị naghịkwa emere anyị ebere?+ E nweghịzi nke ọ bụla n’ime ihe ndị a ị na-emere anyị. 16 Ị bụ Nna anyị.+ Ọ bụrụgodị na Ebreham amaghị anyị,Ọ bụrụkwa na Izrel amaghị anyị,Gịnwa, bụ́ Jehova, bụ Nna anyị. Ị bụ Onye Mgbapụta anyị kemgbe ụwa.+ 17 Jehova, gịnị mere i ji kwe* ka anyị si n’ụzọ gị kpafuo? Gịnị mere i ji kwe* ka obi anyị kpọọ nkụ, nke na anyị anaghịzi atụ egwu gị?+ Jiri maka ndị ohu gị,Bụ́ ndị nke gị,+ meere anyị amara ọzọ. 18 Ndị gị dị nsọ bitụrụ n’ala a. Ma, ndị iro anyị azọdala ụlọ nsọ gị.+ 19 O teela anyị dị ka ndị ị na-achịtụbeghị. O teekwala anyị dị ka ndị na-azatụbeghị aha gị.
^ O nwere ike ịbụ, “uwe na-acha ọbara ọbara.”
^ Ya bụ, Chineke.
^ Ma ọ bụ “m ji merie.”
^ Ma ọ bụ “Mmụọ ozi nọ n’ihu ya.”
^ Ma ọ bụ “aka ya mara mma.”
^ Ma ọ bụ “mmiri miri emi.”
^ Ma ọ bụ “n’ala ịkpa.”
^ Ma ọ bụ “meere onwe gị aha mara mma.”
^ Ma ọ bụ “nke mara mma.”
^ Ma ọ bụ “mee.”
^ Na Hibru, “mee.”